Ngoba wonke umuntu abahlala inhlokomo idolobha ezinomsindo futhi ungcoliswe, kubalulekile ukuhlela amaholide yakho noma ngezimpelasonto. Indlela enhle ukuphuma ngoba izinsukwana ngesikhathi base ukhululekile, angathathwa etholakala endaweni ezinamahlathi. Isihloko sethu lunikezelwe omunye best izivakashi insiza Berdsk Novosibirsk esifundeni, eyinkimbinkimbi ngaphansi kwegama elihle "Blue Lake".
Ngokusho izivakashi kanye iziphathimandla zendawo, ingenye ambalwa iholide izindawo lapho ngokuvumelanayo okwakuthandelene injabulo inzuzo. Nezokungcebeleka isikhungo "Blue Lake" omane egxilile zasemazweni. Eduze kwalo izinsiza kanzulu zokuzithokozisa kanye yemvelo, izinto eziyingqayizivele ifa zomlando namasiko. Njalo zikhona ezinkulu ezemidlalo nemicimbi yokuzijabulisa.
Imininingwane kawonkewonke mayelana nempesheni
A lemizuzu 10 kusukela ebabazekayo ob kwesigubhu kuyinto enhle kakhulu ukuzilibazisa isikhungo "Blue Lake" (Berdsk). It is ngalé esifundeni ezaziwayo. Kuyinto ethandwa kakhulu phakathi kwemindeni nezingane, abathandi bemvelo nokudoba abalandeli.
Impesheni iminyango avulekele unyaka wonke. Ngo ekwindla nasebusika ahlinzeke izaphulelo ezinhle, futhi amakhasimende avamile - izinzuzo. Woza lapha ukuze abantu abafuna ukuze sijabulele ukuthula, uthole imizwelo eyakhayo futhi ashona ogwini echibini elicwengekileyo egcwele carp. Iqembu ngalinye ubudala zikhona izinto ezithakazelisayo.
Esikhathini Pines kuthiwa eseduze esinezitezi ezimbili izakhiwo, ngokhuni izindlu ehlobo kanye Cottages ukhululekile izingodo. Nezokungcebeleka isikhungo "Blue Lake" Unikeza ukubeka indinganiso "Deluxe" futhi "Deluxe" amakamelo. izindlu Summer double, anemisila nekamelo lokugezela nama- nzi ngamanzi abandayo, value abo phakathi 1300 k.
Uma ufuna ngokunethezeka, kutuswa ukuba siphile indlu enamakamelo amabili "suite". It ihlukaniswe yaba egumbini lokuphumula, lokulala kanye ekhishini ndawo. It has a emphemeni, ekhaya Imishini (ikakhulukazi elula abazali nezingane) kanye ne-Internet. ikamelo okunjalo ngeke ukhokhe 3000 k. (Per ngosuku ongu-1).
Ngaphandle kwezinye izindlu Cottages isivakashi, yakhelwe kulabo zijwayele okunethezeka. Esitezi sokuqala siqukethe ikamelo elikhulu iziko nge nempahla zanamuhla, lokudlela ekhishini izindawo, kanye namachibi okubhukuda, izindlu zangasese kanye sauna. Esitezi sesibili - 4 amakamelo nge yokulungiswa enkulu. Phakathi nenkathi kaKhisimusi uzokhokhiswa okungenani 15,000 p. (Per ilanga) phakathi nesonto - mayelana 10,000 p.
Eceleni ehhotela ikhokhwe ukudla. ibhulakufesi kuphela futhi ibhodi nesigamu, noma emithathu isikhathi Ukudla kungenziwa yayala uma uthanda. Nezokungcebeleka isikhungo "Blue Lake" (Novosibirsk / Berdsk) has on insimu yalo igumbi lokudlela elikhulu, ukukhonza esihlwabusayo ekhaya yokupheka. labapheki Ukunakekela kanye onekhono ukulungiselela air ehla futhi uphudingi ukuthi uqiniseka ukujabulela izinyo elimnandi.
Okwavelela yokuziqhenya futhi impesheni kuba phambi echibini yemvelo. Ngesikhathi sasehlobo, ukuvula isizini ukubhukuda. Ibhishi ehlanzekile futhi zigcinwe kahle. Nezokungcebeleka isikhungo "Blue Lake" ifakwe awnings pergolas, amatafula kanye izoso, lapho izivakashi bazokwazi ngempumelelo ukuchitha yokuzilibazisa yabo: gazinga, ukupheka noma iyiphi ukudla phezu izoso noma ecula neqembu isiginci.
Ukuze izinkampani ezinkulu ukunikela ithala omkhulu nge izihlalo 200. Ngemva suku omatasa lokuphumula qiniseka ukuthi uvakashela sauna noma lwendabuko sauna Russian nge imishanelo. Lokhu siyindlela olukhulu lokuphumula okuphelele kanye nokuhlanza.
It unikeza yokupaka mahhala izimoto 25. isizinda "Blue Lake" abantu asebenzayo ziyonikela imisebenzi yezemidlalo ku ejimini. Nganoma yisiphi isikhathi, ngendlela eziyinkimbinkimbi ihlelwe ukudoba mass ngoba carp futhi utshani carp. Phakathi namaholide ezinkulu, ezifana Epiphany, Christmas, Carnival, Easter, ekuphathweni ulungiselela emikhosini ejabulisayo futhi ukubhukuda ku ichibi.
Izivakashi eza sihlanganise ukuphumula ngomsebenzi, Ungahlala ukusizakala amakamelo amathathu ingqungquthela 20, 60 noma 150 abantu. Zonke amakamelo ngobuchwepheshe ahlomele ibhizinisi noma ngezikhathi ezikhethekile. ezinkulu TV flat screen inikezelwe isiqophi nezethulo. Efanele ahlele noma yimuphi umcimbi ukusiza abasebenzi ikukhonzile.
Nezokungcebeleka isikhungo "Blue Lake" kuthatha abazali nezingane ezincane. Ezinganeni abangazange sebethole engu-10 (ngaphandle imibhede), asikho akhokhe extra. izingane obunesithukuthezi futhi cranky nentsha ngeke isikhathi, ngoba yakhiwe ezinkulu adventure ebaleni lokudlala ne senhliziyo, amaslayidi, kanye nesigaxa ovundlile. Kuyinto isikhungo isikwele sokuqasha zezingane.
Ngaphezu okudoba futhi izintaba izinkambo ukuzilibazisa isikhungo "Blue Lake" (Berdsk) uncoma ukwenza ihhashi ogibele noma imisebenzi yamanzi nemidlalo. Isebenza inkantolo ithenisi futhi ibanga elilingana nenkundla kanobhutshuzwayo. Kukhona igumbi Billiard, ebusika - rink ngezicathulo. imishini Ezemidlalo ekhishwe Rentals - sebheyili.
Efingqa, Ngifuna ukwengeza ukuthi eziyinkimbinkimbi izivakashi "Blue Lake" (Novosibirsk / Berdsk) efanelekayo abantu ezahlukene isimo sezenhlalo yokuchuma ngokwezomnotho. Qondisa ngokuhlakanipha ukuza inhlangano kwezinsizakalo kanye service, ngakho kukhona njalo aminyene (ikakhulukazi ehlobo) futhi zikhululekile. izikhombo eziningi ukuqinisekisa leli qiniso.
Kulesi ekhoneni eziluhlaza Novosibirsk esifundeni wazakhela kahle, ezemidlalo, ogwini indawo kanye nezokuvakasha. Pension siklanyelwe ukhathele izakhamizi kwansuku ezisemadolobheni amandla amasha futhi ngokwenama. Lokho kwenza lokhu izilwane zasendle, umoya ohlanzekile, ukuntuleka ezinomsindo emkhathini yomphakathi futhi enobungane.
Bilirubin egazini - i kuyinkomba ebaluleke lekutfola wokugaya ukudla izifo uhlelo
Kanjani ukwakha ishadi Excel?
Igumbi Rack nokuklanywa: design imibono